CALEEMAHA KALA DUWAN "SANNAD-GUURADA NOVOCHERKASSK" - VITICULTURE
Caleemaha kala duwan "sannad-guurada Novocherkassk"
Xannaanaynta iyo taranta noocyo cusub oo canab ah ayaa lagu dhaqmaa kumanaan sanadood sida xirfadlayaal, sida hiitiryada fudud.
Waad ku mahadsan tahay dadaalkooda iyo sanado badan oo dadaal ah, tiro badan oo ah noocyada canabka ah ayaa horeba loo abuuray kaas oo ku qanciya goryaan kasta.
Gaar ahaan, mid ka mid ah natiijooyinka tijaabooyinka hiwaayadda, taas oo ah mid aad u caan ah maanta, waa Cinjir Novocherkassk Anniversary.
Jacaylka cirifka iyo taageerayaasha caleenta miraha ah waxay kasbadeen kala duwanaanshahan iyada oo ay uga mahad celinayso dalagyada waaweyn ee waaweyn iyo ballaaran.
Ku saabsan dhammaan sifooyinka ee canabkani wuxuu hoos ku sheegi doonaa.
Sharaxaad ka mid ah astaamaha isbahaysiga isdhexgalka ah "Maalinta Novocherkassk"
Canabka quruxda badani waxa loo tixgeliyaa iskudhaf dhexdhexaad ah, oo ah qoraaga hiwaayadda N.V. Kraynov. Iyada oo dadaalka this ee korantada hiwaayadda, maanta waxaan si fudud u dhali kartaa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee sabiib ah on our goob.
Asalka waalidku waa mid aan la garanaynin, inkasta oo ka dambeysa waxyaabaha guud ee Jubilee ee Novocherkassk uu la mid yahay labada maskaxeed ee Kraynov, Isbedelka iyo Viktor. Si kastaba ha noqotee, ilaha qaarkood waxay tilmaamayaan in caleemaha Talisman ee ka soo baxa kala duwanaanta Kishmish Radiant waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay labadiisa waalid.
Rucubaha-giicada canabkiisa "Maalinta Novocherkassk"
Mid ka mid ah rucubyada ugu quruxda badan ee canabkiisa "Anniversary of Novocherkassk" waxa loola jeedaa mid ka mid ah noocyada ugu horreeya. Canabkiisa miisaankiisu wuxuu gaari karaa qiimaha ilaa 3 kiilo, in kasta oo celceliska tirada canabkuna yahay qiyaastii 0.8-1.6 kiilo garaam.
Intaa waxaa dheer, kooxuhu waxay leeyihiin muuqaal aad u qurux badan, taas oo ah faa'iido kale oo kala duwan. Waxaa xusid mudan in qaabka canabku ee "Novocherkassk Anniversary" uu yahay mid aad u cufsan, wuxuu ku yaalaa tiro badan oo miro ah. Badanaa, qaabkooda, kooxahaani waa kuwa cayniga ah ama qalabayn.
Canab ee Novocherkassk's Anniversary of canab si buuxda u dhigma size size dhammaan codsiyada kor ku-sharaxay. Celcelis ahaan, dhererkoodu waa 3.8 sentimitir, iyo ballac - ilaa 2.3 sentimitir. Isla mar ahaantaana, Celceliska miro miro celcelis ahaan waa miisaanka 12-18 grams. Sidaa darteed, canabkani waxaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah kuwa ugu weyn ee nooca.
Noocyada kala duwan ee kala duwan ee noocyada kala duwan ayaa ah qaabka loo yaqaan "elongated-oval" oo ka mid ah nooca berry, rinji cadaan iyo casaan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in markuu gaaro Bisaylkiisa buuxa, canabku wuxuu noqonayaa huruud ah-casaan ama casaan. Isla mar ahaantaana, cufnaanta maqaarka ee berry waa dhexdhexaad ah, inkasta oo aan si buuxda loo dareemin marka la cuno.
Goosashada Jubilee Novocherkassk waa mid aad u saraysa, oo beertii canabka ah wuxuu awoodaa in uu midho dhasho sannad walba iyada oo aan kala go 'lahayn.
Calaamadaha saxaraha ah ee berry canab ah ee Jubilee Novlorerkassk, mid waa inuu fiiro gaar ah u leeyahay hilibka aan caadiga ahayn iyo content sare ee casiir. Cufnaanta saxarada ee canab lagu sharaxay waa mid dhexdhexaad ah. Waa mid aad u fiican oo udhexeeya dhadhanka, ma laha wax dhadhan gaar ah. Waxaa habboon in aad fiiro gaar ah u leedahay sifooyinka muhiimka ah ee miro kuwan: marka xilliga korriinku uu soo socdo, berry ayaa si dhakhso ah u bilaabaya inuu lumiyo dhamaan astaamahooda, si ay u helaan bisaylka macaamiisha xitaa ka hor inta aaney bilaabin ka goyn kara.
By habka, content sonkorta ee saxarka ee berry kuwaas oo celcelis ahaan u dhiganta 16.8 garaamkiiba 1 cm3. Isla mar ahaantaa, content ee acid ee hal litir oo casiir ah canab ma aha wax ka badan 5.9 garaam.
Sida isticmaalka canab of noocyo kala duwan, "Anniversary of Novocherkassk" waa in loo aaneeyey miiska. Waa quruxda ugu fiican ee miis kasta, inta badan waxaa loo isticmaalaa si toos ah cuntada. Iyadoo ay ugu wacan tahay hodantinnada caleenta miraha canabka, waxay ku fiican yihiin winemaking.
Ereyada dhowr ah oo ku saabsan dhalidda canab ah "sannad-guurada Novocherkassk"
Weynaanta noocyada kala duwan ma aha oo kaliya berry waaweyn iyo rucubo, laakiin sidoo kale lambarka.
Sida hore loo sheegay, canabku si dhakhso ah u bislaaday - horraantii bartamihii bishii Agoosto, iyadoo ku xiran jawiga gobolka ee koritaanka baadiyaha.
Caadi ahaan xilliga daaqsinta ee kala duwanaanta noocaan ah wax badan kama badna 120 maalmood. Inta lagu jiro waqtigan, iyada oo si xushmad leh ugu wanaagsan ee 22-24 caleemaha of a baadiyaha sabiib ah, waxaa awood u leh inuu fadlan kooxo kooxo leh dhoobo si fiican u bislaaday oo buuxiyey.
Ku saabsan faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee canab "Sabtida Novocherkassk"
Marka la beero noocyo "Anniversary of Novocherkassk" beeralayda badanaa waxay ku tiirsan yihiin qiyaasta hadhuudhka iyo dhalidda dalagga. Midda labaad waxay muhiim u tahay sida dhadhanka ugu fiican ee canabka of kala duwan. Intaa waxaa dheer, a baadiyaha xoog leh-sii kordhaya baadiyaha sidoo kale waa mid aad u adkaysi u:
Dildilaasho leh oidiyoon (dhoobo bur ah) iyo xagta oo aan la ogaan inta lagu jiro daaweynta ka hortag ah baadiyaha sabiib ah.
Beerka canabka ah ma saameynayo barafka ilaa -23ºS, laakiin haddii ay jirto khatar ah in hoos loogu dhigo heerkulka si loo qiimeeyo qiimaha, waa lagama maarmaan in la daboolo xilliga qaboobaha oo dhan.
Kala duwanaanta ayaa waxay heshay qayb ballaadhan, iyo mudo dheer oo ah kaydinta dalagga, iyo sidoo kale ku habboonaanta wanaagsan ee gaadiidka.
Dhibaatooyinka kala duwan: waxa muhiim ah in la ogaado bilowga
In kasta oo xaqiiqda ah in guud ahaan noocyada kala duwan ee canbaar ee Novocherkassk Jubilee ay u qalmaan in loo tixgeliyo mid ka mid ah ugu guulaha badan oo rajo leh beerta guriga, sababtoo ah waa isku-dhaf adag u adkaysta, waxay weli u baahan tahay fiiro badan oo ka mid ah geedka.
Gaar ahaan, si aad u hesho canab aad u weyn, iyada oo aan la gooyo iyo diirada inta lagu jiro muddada abuurka canab, baadiyaha aan la tagi karin. Sidoo kale, iyada oo aan la buufin prophylactic, kala duwan tani waxay si dhakhso ah u saameyn kartaa cudurada fungal, sidaas oo kale oo aad ka mid ah dalagga.
Sidoo kale, sababtoo ah heerka sonkorta sare ee berry, Canabkani waa mid aad u jeclaanaya xajmiga. Sidaa darteed, in kasta oo dhexdhexaad ah, noocyada kala duwan ayaa si weyn u saameeya cayayaanka.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo oo ku saabsan canab qurux badan
Beerta Beerta "Maalinta Novocherkassk": sida looga hortago qashinka?
Ma laha waayo-aragnimo ah canab beerto ma aha dembi si loo caawiyo xirfadlayaasha ama ugu yaraan ahaaneed. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la bixiyo fiiro gaar ah oo tixgeliyo dhinacyada soo socda:
Waa muhiim inaadan qaldanayn beerto xilliga abuurista. Dhab ahaantii, da'da yar, gooynta iyo sabuubka ayaa aad uga baqaya muraayadaha iyo xaaladaha xun. Sidaa darteed, waqtiga ugu fiican ee canab beerto waa dhexdhexaad, marka hawadu mar hore kuleylayso + 15ºS, ciidda waxay leedahay heerkul aan ka yareyn + 10ºS. Xaaladaha intooda badan, wakhtiga beerto waxay ku xiran tahay sida aad u socotid canab: warshad ama dhirta xididadooda. Xaqiiqo ahaan, bararista waxaa loo samayn karaa siyaabo badan, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa ugu wanaagsan ee lagu fuliyay dayrta - adoo goynaya goynta cagaaran si ay isku mid cagaaran. Si kastaba ha ahaatee, in dayrta dayrta ee canab ah waa in ay bixiyaan dareenka badan si ay daboolka for jiilaalka.
Sidoo kale waa muhiim in la helo meel wanaagsan oo lagu koro caleemaha Novocherkassk. Canabkani waa mid xoogan, wuxuuna u baahan yahay qadar aad u ballaaran oo qorrax leh iyo taageero wanaagsan sidaa darteed dalaggu si wanaagsan ayuu u kobcin karaa oo u daadi karaa. Sidoo kale, waxaa habboon in la tixgeliyo in canabtu ay si fudud u dabooli karaan qorshooyinka iyo dabaylaha qabow. Sidaa darteed, dhinaca koonfureed ee dhismaha guriga ayaa ugu habboon dalkiisa, kaas oo aad si fudud ugu dhejin kartid taageero si loo daadiyo baadiyaha canabka ah.
Xayawaanka ma aha mid si xajmi ah oo canab ah, laakiin weli ciidda waa inay ahaato mid bacrin ah. Shaki la'aan, fursada ugu wanaagsani waxay noqon laheyd carro madow, laakiin dhoobada iftiinka ayaa si fiican u shaqeyn doonta. Tan ugu muhiimsan, ciidku si fiican ayuu u gudbi karaa qoyaankiisa mana hayn karo xaddi badan oo ka mid ah. Sidoo kale, waa inaad si taxadar leh u taxadartaa qoto dheer ee biyaha: markaad kor u qaadeysid 1.5 mitir, waxaa habboon in lagu qodo godka dheecaan ama god, maxaa yeelay waxay nadiifin doonaan nidaamka xididka ee baadiyaha.
Sida loo diyaariyo canab si ay u beerto?
Iyada oo aan loo eegin nooc ka mid ah beerto aad dooratay, waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso canab si aan habooneyn. Haddii aad go'aansato inaad soo saarto Jubilee Novocherkassk ee xididdadaada, waxa fiican inaad iibsato seedling. Laakiin markaad dooranayso, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar badan yeelatid: waa in ay taxadaraan nidaamka xididka, oo dooro seedling leh caddaan, caafimaad leh, oo aan xididdada la qalajiyey.
Sidoo kale, seedling waa inuu lahaado cagaaran. Dabcan, seedling waa la karkarin karaa, isaga oo ku beeri doona jarida carrada qoyan ama adoo ku daadinaya biyaha. Si kastaba ha ahaatee, kahor intaan la beeri, waxaa lagula talinayaa in ay qabato dhowr maalmood biyo iyo kobciso kiciyaasha kobaca.
Tallaalka tallaalka waa in sidoo kale loo diyaariyaa. First of dhan, qaybta hoose ee waa in la gooyaa, ka soo laabto indhaha hoose hoos by 1-2 millimitir. Gooyo waxaa lagu sameeyaa habab u eg., kaliya si marka barafka, ku tiirsan jarida rootstock si aad u dhow. Waxaa lagu talinayaa in la isku shaandheeyo qaybta kore ee gooyo indhaha si ay u ilaaliso qoyaanka. Si arrintan loo sameeyo, jarida ayaa lagu rusheeyaa paraffin kulul oo lagu qaboojiyey biyo.
Hase yeeshe marka aad hirgelineyso geeddi-socodkan waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u qaadatid oo ka soo qaad lugahaaga si aad u dhaqso badan si aaney u waxyeeleynin. Qaybta hoose ee jarista ayaa lagula talinayaa in la qabto ka hor inta aan la qabin biyo, iyo, iyo sidoo kale seedling, ee kiciyaha ee koritaanka xididka.
Xayawaanka ayaa sidoo kale u baahan diyaargarow gaar ah, tan iyo markii laga saaro baadiyaha sabiibta ayaan weli ku habooneyn in la sii daayo. Ugu horreyntii, waxay ku xiran tahay nadiifinta iyo ka saarida dhammaan qaladaadka, iyo sidoo kale wasakh. Taas ka dib, waa inaad sii wadaa qaybinta. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa qalab aad u fiiqan iyo digaag. Ucidku waa inuusan noqon mid weyn, tanina waxay dhaawici kartaa hab-nololeedka.
Sababta canabka ah - beeritaanka haboon
Ceelka for seedling canab ah uma baahna in la qodo mid weyn, maxaa yeelay ma laha xidido waaweyn. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la aaso xalka organic ku biiray carrada, taas oo kicin doona koritaanka ee seedling. Waa inay jirtaa lakabka carrada aan la beerin ee bacrimin ah.
Ka dib markii la bacriminta ee yaamayska ku dhejin, sapling laftiisa ayaa hoos loo dhigaa. Waa muhiim inaad ka baxdid qulqulka xididka korkiisa dusheeda oo si taxadar leh u dabool, adoo ka taxadaraya inaadan waxyeeleynin xididada. Ka dib markii seeding canab ah waa la aasay, waxay u baahan tahay waraabin badan oo ku saabsan 20-25 litir oo biyo ah. Ciidda ka dib dhowr maalmood ka dib markii la beero iyo waraabinta waa in la mulched.
Xannaanaynta jaritaanka canabka "Maalinta Novocherkassk"
Xidid diyaarsan ayaa la dhigayaa kala qaybinta kaydka, iyada oo la geynayo oo kaliya qayb ka gooyo si hoos loogu dhigo peephole hoose ee dusha sare. Meelaha jarista waa inay si adag u xajiyaan ul.
Shtamb waa in uu ahaado mid si adag loo jiido oo soo saari kara sanadka soo socda. Sidoo kale, laf-dhabarka waxaa badanaa lagu dhajiyaa dhoobo qoyan ama shidaal si loo ilaaliyo qoyaanka rootstock muddo dheer.
Ka dib markii la jarjarey, xayawaanka ayaa sidoo kale si weyn u waraabiyey.
Haddii kaydka uu yahay mid aad u ballaaran, ma aha mid, laakiin dhowr gooyn ayaa lagu dhejin karaa qaybahooda. Tani waxay heli doontaa baadiyaha aad u weyn.
Daryeelka sanadlaha Novocherkassk: Jawaabaha su'aasha ah sida loo hubiyo waxsoosaar sir ah
Qeexida cilladaha kala duwan ee noocyada kala duwan, waxaan hore u soo sheegnay in ay qaadan doonto xoogaa dadaal ah si loo gaaro wax-soo-saarka wanaagsan ee beeraha. Dhammaan arrimahan waxay khuseeyaan daryeelka iyo daryeelka joogtada ah.
Waraabinta noocyo daaqsiyo ah canabka ah "Maalinta Novocherkassk" waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo ugu yaraan 2 jeer xilliga daaqsinka. Tan waxaa ugu fiican ka hor iyo ka dib soo galo ee baadiyaha ee muddada ubax. Sidaa darteed, waxaa suurtogal ah in la siiyo isaga oo leh qiyaasta ugu wanaagsan ee qoyaanka ee samaynta dalagga mustaqbalka. Inta lagu jiro xilliyada abaarta, canabku xataa waxaa lagu talinayaa waraabin dheeraad ah, haddii kale si aad u weyn ayay u xoqin kartaa berry.
Ka dib markii la waraabiyo, carrada ku wareegsan canabku badanaa waa la mulched leh Bacriminta organic. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo khudraddan, iyada oo ku dhexjireysa wareega wareega ah ee foostada 3 sentimitir dhererka. Mulch, marka lagu daro qoyaanka ciidda oo daboolaya inta lagu jiro barafka, sidoo kale waxay u adeegtaa sida dharka ugu fiican ee baadiyaha sabiib ah. Laakiin, ka sokow canab a organic, waxaa lagu talinayaa in ay Bacriminta macdanta hodanka ah ee potassium iyo fosfooraska.
Canab dhoobo: talooyin iyo khiyaamo
Si canab si uu midho u dhali karaa, geedka canabka ah wuxuu si fiican u bixin karaa goosashada maaddooyinka lagama maarmaanka ah aad ayey muhiim u tahay in si joogta ah looga gooyo. Tan waxaa ugu fiican xilliga dayrta ama guga hore. Waxay u fiicantahay in ay ka baxdo ilaa 24 caleemo hal baadiyaha ah, iyada oo lagu raro ugu badnaan 45 ilbiriqsi. Gaabinta geedka canabka ah sidoo kale waa lagama maarmaan sannad walba, oo laga saaro kelyaha. Nooca baadiyaha ayaa ka wanaagsan in la doorto taageeraha kaas oo ka dhigi doona mid ku haboon inuu daryeelo.
Sidoo kale, abuurka canabku waa mid aad u muhiim ah in la sameeyo wax laga beddelo. Kaliya hal farabadan ayaa ku dhici doona hal jaale.
Kordhi caabbinta canabka ilaa cawska
Daboolida duurka qabow ee xilliga qaboobaha iyo dhaxan sidoo kale waa muhiim, maxaa yeelay marka heerkulku hoos udhacdo -23 ° C, alwaaxdiisu waxay aad u xanuunsan kartaa. Tani waxaad u isticmaali kartaa aalado iyo qalab aad u kala duwan. Wanaag ku habboon oo caleemo dhejis ah, waxaad ku dili kartaa geedka canabka ah ee cagaarka ah kuna dabooli kara ciidda. Iyada oo khatarta ah ee heerkulka aad u hooseeya, canabku si fiican ugu riday dhulka si buuxda oo daboolay ciidda.
Ciid waxay ku dabooshaa geedo yar yar iyo gooyn meeshoodii. Si arrintan loo sameeyo, in ka badan canab dhalinyaro ah waxay dhigeen qaar ka mid ah xayawaanka ama tuubada, kuwaas oo aan lahayn hoos. Dheeraad ah, weelkan ayaa ka buuxsamaya ciidda, hubinta ilaalinta canabka ilaa guga.
Sidee loo ilaaliyaa canabka cudurka?
Tan iyo guga, waxaa aad u muhiim ah in la rusheeyo gabi ahaanba dhammaan baadiyaha sabiib ah. In kasta oo xaqiiqda ah in kala duwanaanshahan uu ka mid yahay kuwa yar ee iska caabin adag, suurtagalnimada in la jabiyo burka dhoobada iyo xaydhku weli wali. Sidaa darteed, 2-3 buufiyo ugu wanaagsan hal xilli ciyaareed: 1-2 ka hor duurka u galaan muddada ubax, iyo 1 ka dib digirta bilaabaan si ay u sameeyaan rucubo. Herbicides waxaa loo isticmaalaa daroogo, iyada oo loola jeedo ka-hortagga cuduro gaar ah.
Qaababka wax lagu duubo ee beeska ee huuriyada "Berendey"
Qarsoonaanta beerashada guuleysta ee ruibiliinka guriga
Ka bixitaanka kuwa diidaya kaabajka sababtoo ah xanuunka caloosha. Siyaabaha loo oggol yahay isticmaalka iyo cuntada
Cunnooyinka cunto kariska ee waxtarka leh ee xilliga jiilaalka: ukunta la kariyey oo la kariyey dabacasaha, toonta iyo khudaarta kale
Sidee ayaad uga warwareegi kartaa ansaarta
Dhirta xayawaanka ah
Bataato beerto ka yar caws
Soosaarka ukunta oo kordhay ee digaagga
Beereyaal iyo daryeel
Beerta Digirta Abuurka
Geedo koraya waa arrin aad u muhiim ah. Waxaa jira xirfado badan oo ka caawin kara mustaqbalka si ay u koraan dalagyada wanaagsan. Mid ka mid ah khiyaamadani waa qabashada. Kuwo badani waxay aaminsan yihiin in aanay muhiim ahayn, sidaas awgeed waxa la samaynayo ama aan la samayn - qof kasta ayaa go'aaminaya naftiisa. Si kastaba ha ahaatee, shaki la'aan, waxay leedahay faa'iidooyin badan. Read More
Sida loo ilaaliyo currants aad ka cudurada iyo cayayaanka
Tilmaamaha mulching strawberry: noocyada mulch iyo xeerarka isticmaalka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Viticulture 2019